5 NOOCYO YAANYO AH OO QURXIN DOONA BEERTAADA IYO MIISKA - NOOCYO YAANYO
Beerta bilowga ah ayaa laga yaabaa inay xiiseyneyso su'aasha ah waxa loo baahan yahay in la beeray si loo helo dalag aad u fiican.
Maqaalkan waxaa loogu talagalay kuwa doonaya in ay ku guuleystaan ​​yaanyada sii kordhaya.
Ka dib dhan, waxaa jira noocyo kala duwan ee yaanyada, oo dhammaantood waa ay kala duwan yihiin dhadhanka, midabka, cabbirka iyo sifooyinka kale.
Sidaa darteed, haddii aad naftaada u dajiso si aad u hesho yaanyo delicious, ka dibna macluumaadkaan waa adiga.
Kala duwan yaanyo "Wicitaan Dimoqraadi ah"
Darajada tamaacada waxaa lagu kori karaa labadaba dhulka dhulka, iyo dhul furan. Waxay ka tirsan tahay noocyada kala duwan, taas oo ah, waxay joojiyaan koritaanka ka dib 4-5 burqanimadu u muuqdaan.
Kuwani waa yaanyo hore, si deg deg ah u daadi. Dalagyada si fiican ayey u koraan, xoojinta sida noocaas ah, maya. Caleemaha waa mid dhexdhexaad ah, cagaaran cagaaran.
Dhirta dhirta waxaa la gaarsiiyaa 70 cm Miro waa weyn, miisaankoodu waa 100 - 200 g, hase yeeshee daryeel fiican ayaa gaari kara 0.9 kg. Qaabka tamaandhada waa wareegsan, ribbed, wareega wareega, casaan. Jirka waa mid casiir leh, firfircoon, oo leh dhadhan macaan. Mid ka mid ah dhirta waxay soo saaraan 5 ilaa 9 kg oo miro ah.
wuu kobcin karaa xitaa cimilada adag
in miraha bislaado wax yar ka sii xumaato muuqaalka
Iyada oo ay sabab u tahay nooca kala duwan, goosashada ugu horeysay noqon doonaa kuwa ugu qanisan, iyo ka dib markii in miraha horay loo yareeyay size
Saar geedo u baahan 55 - 60 maalmood ka hor laga beerto geedo. Seeds waxaa lagu beeraa koobabka caadiga ah, iyo weel gaar ah (cajalad). Dukaamo khaas ah ayaa sidoo kale bixiya doorasho weyn oo ah dhir macaan oo gaar ah, kuwaas oo geedo lagu meeleeyo dhulka marka la beeray.
Xulashada ugu wanaagsan ee dhul loogu talagalay geedo waa isku dhafan ciid, laakiin waxaa si madax banaan loo sameyn karaa. Si aad u sameyso is-wax-soosaarka, waxaad u baahan tahay inaad qaadato carrada beerta caadiga ah, humus iyo ciid. Kuwani waa qaybo ka mid ah isku dar ah ciidda, waa in lagu daraa saamiga 3: 3: 4. Isku dar ah noocan oo kale ah waa in ay ahaato "si qarsoodi ah", taas oo ah, ka boodboodaya shaandhada si aysan jirin mugdi.
Tan iyo dhulka caadiga ah waxaa jiri kara cudurro kala duwan oo cudurro ah, waa in lagu daaweeyaa fuuq baxa jeermiska. Isku darida ciidda waxay u baahan tahay in lagu buuxiyo weelal loogu talagalay geedo, ka dibna is dulqaadan.
Si aad u abuurto abuurka, waxaad u baahan tahay inaad ka sameysid niyadjab yar oo ku jira weel kasta iyo meel 2 abuur ah, si aad u hesho beddelaad geedo ah (mid daciif ah ayaa laga saaraa, kan xooggan waa in laga tagaa). Seeds u baahan tahay in lagu hurdo isku isku dar ah ciidda iyo dabooli filim ka hor caleemaha ugu horeeya. Arrimaha aadka u muhiimka ah waa heerkulka iyo iftiinka.
Yaanyo waxay u baahan yihiin wax badan oo qorrax leh, iyo gaar ahaan haddii ay duurka u yihiin gobolka ee geedo. Sidaa darteed, haddii maalinta iftiinka ee gobolkaagu aanu ahayn waqti dheer (in ka yar 14 - 16 saacadood), markaa waxaad u baahan tahay inaad ku rakibtid iftiin macmal ah oo gaar ah, taas oo geedo waa in ay koraan.
Waa lagama maarmaan in si joogto ah loo leexiyo dharka dhinacyada kala duwan si ay iftiinka u gaaro geedo sida siman sida ugu macquulsan. Heerkulka heerkulka wanaagsan ee geedo ka mid ah Wicitaannada Mustaqbalka waxay noqon doonaan 23-25 ​​° C, laakiin sida adag, heerkulka waxaa lagu yarayn karaa ilaa 18-20 ° C.
Biyaha geedo badanaa waxay u baahan yihiin, laakiin ma badana, sidaa daraadeed biyuhu ma istaagaan. Marka geedo ay weli yar yihiin, waxaa fiican in ay iyaga ku biyo leh dhalo buufin. Laakiin marka geedo soo koray ku filan, waxaa fiican in biyaha ku shub digsiga. Kadibna xididdadu waxay noqon doonaan kuwo awood badan.
Ka dib markii geedo koraan ilaa 3 - 5 cm, waxay u baahan tahay in la transplanted. Nidaamkan waxaa loogu yeeraa xulasho. Geedo loo baahan yahay in la si joogto ah u bacrimiya. Marka ugu horeysa ee nidaamkan waxaa la qabtaa 2 toddobaad kaddib marka la sameeyo.
Wakhtiga dhan ee koritaanka geedo, bacarimisku waa in la sameeyaa 3 - 4 jeer oo leh mudo ah 2 toddobaad. Bacrimiyo sida dabiiciga ah iyo qummanaanta. Marka la soo dego, ka dibna 1 sq.m. Waxaad dhigi kartaa geedo 2 - 3 si ay warshad kastaa u hesho meel ku filan.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan beerista yaanyada.
Dhulka agagaarka duurka iyo inta u dhaxaysa iyaga u baahan si joogto ah u fur, kuwaas oo ah, 9 - 12 maalmood oo kasta si loo beero dhulka, iyo qoto dheer ku filan. Hilling wuxuu u baahan yahay in la sameeyo si uu dhirta u bilaabo xididdada cusub.
Ka dib 10 - 11 maalmood ka dib markii la beero geedo, dhulka ku wareegsan duurka waa in la waraabiyo, ka dibna hilling waa in la sameeyo dhulka la mid ah. Ka dib 2.5 ilaa 3 asbuuc ka dib, habkani waa in lagu celiyo.
Tamaandhada waxay u baahan tahay in la waraabiyo si joogto ah, laakiin ma aha in biyuhu ka badan yihiin ciidda. Waraabinta ugu horeysa waa in la sameeyaa isla markiiba ka dib markii laga beerto, iyo duurka waa in lagu daadiyo (1 l halkii baadiyaha). 10 maalmood oo aad u baahan tahay inaad sugtid, oo kaliya markaas ku shubaa duurka si adag oo hoos yimaada xididka leh xisaabinta 0.5 - 1 litir oo biyo ah hal baadiyaha.
Waxay ka fiicantahay in la magdhabo la'aanta qoyaanka isla markiiba ka dib qorrax dhaca ama cimilada daruuro leh, si caleemuhu u gubaan qorraxda. Gaar ahaan dhirta u baahan tahay qoyaan inta lagu jiro ubax. Waxaa fiican in la isku daro waraabinta bacriminta.
Bacrimiya ciidda si joogto ah. Marka ugu horeysa waxay ka fiican tahay inaad sameyso 1.5 - 2 toddobaad kadib markaad degto. Markaas waxaad u baahan tahay inaad sameysid iyo arrimo organic, iyo Bacriminta macdanta ee qaab isku dar ah oo biyo ah leh mullein (8: 1) oo lagu daro superphosphate (20 g 10 litir oo xal). 10 litir oo isku dhafkan ah ayaa ku filan 10 busha. Labada dhaymood ee soo socda waa inay noqdaan kuwo qalalan, sidaas darteed waxay u fiicnaan laheyd inay iyaga ku daraan dabacsan ama hilling.
Xisaabinta waxaa lagu sameeyaa 1 mitir oo laba jibbaaran, halkaasoo aad u baahan tahay inaad samayso superphosphate, cusbo potash iyo amooniyam (2: 1.5: 1, oo lagu xisaabiyo grams). Tan iyo noocyada kala duwan ee "Call Waayeelka" waa miro aad u culus, waxaad u baahan tahay wakhti aad ku kiciso oo aad xiirto duurka. Waxay noqon doontaa mid ku filan in laga tago 2 -
Waxaa fiican in la xiro dhirta noocan oo kale ah si ay u baahdaan in la geeyo dhulka oo fogaan ah oo ku saabsan 10 cm ka soo biqil dhexe. Wixii aad u baahan tahay inaad isticmaasho qalab aad u jilicsan oo aan waxyeeleynin asliga ah. Nidaamkan waxaa la fuliyaa seddex jeer: marka hore waxaad u baahan tahay inaad xirto geedo la beeray oo ah heerka caleen ugu horeysa, ka dibna xargaha waa in la sara kiciyo marka hore gacanta labaad, kadibna saddexaad.
Inta badan noocyo yaanyo ah ayaa saameeya cudurka da ' Nasiib darro, "Wicitaanka Mustaqbalka" - ma aha wax laga reebo. Laakiin marka la eego daaweynta waqtiga habboon ee caabuqa waa la iska ilaalin karaa. Si arrintan loo sameeyo, ka hor intaan la beeriin iyo 2 toddobaad kadib, duurka waxay u baahan yihiin in lagu daaweeyo isku dar ah Bordeaux (xal 1%). Waxaad isticmaali kartaa, dabcan, isticmaal fungicides oo ku jira copper, laakiin qaar ka mid ah kansarku waxay ku sii jiri karaan midhaha, ka dibna - u gali jirkaaga.
Sharaxaada kala duwan ee "Bull's heart"
Kala duwan tani waa aqalka dhirta lagu koriyo oo labadaba ku habboon dhul furan. Kala duwanaanshuhu waa mid go'aaminaya. Xidhanka tamaandhadani waa mid aad u adag, faafaya, gaaraya dherer ka badan 1.5 m.
Haddii aad tani ku koraan berrin furan, waxaad heli doontaa goosashada 3-5 kg ​​hal bush. Haddii aad doorato doorka aqalka dhirta lagu koriyo, dhalidda ayaa kor u qaadi doonta 9 - 12 kg halkii geedka.
Kala duwan waa dhexe-Bisaylkiisa, taas oo ah, 120 - 130 maalmood ka dib geedo soo kordhay, duurka u bislaadaan. Midhaha kow ka mid ah baadiyaha waxay ku kala duwanaan kartaa qaabka iyo miisaanka. Kala duwanaantan waxaa lagu gartaa meesha ay ku yaalaan jimicsiga hoose ee miraha ugu weyn, miisaanka kaas oo gaaraya 400 g, iyo tiro yaanyo ah ayaa hore loo yareeyey 100 g.
Miraha ka mid ah "Bull's Heart" kala duwan yihiin kuwo aad u casiir ah, fareeshka, leeyihiin dhadhan macaan-macaan. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo kala duwan, waxayna ku kala duwan yihiin dhadhanka iyo midabka.
Tamaandhada waxay noqon kartaa guduud, jaalle, casaan iyo xitaa madow.
dhadhan weyn oo miro
cabbir cajiib ah ee yaanyada
Sababtoo ah cabbirkooda weyn ee yaanyada ah kuma haboona caanaha
Geedaha "Bull Heart" kala duwan ayaa sidoo kale la iibsan karaa oo la soo saaraa si madaxbannaan. Ma jiraan sifooyin muhiim ah ee beerista geedo yaanyadaas.
Ka hor inta aan la saarin abuurka waa in lagu daaweeyaa kiniinka potassium waxaana lagu duraa biyo. Waqtiga ugu wanaagsan ee beeridda waa bilowga Maarso. Geedo quus ah ayaa u baahan marka ay jiraan 2 caleen dhab ah. Ka waraabinta, dib u gurashada iyo bacariminta waxaa lagu fuliyaa habka caadiga ah. Per 1 sq.m. Dhulku wuxuu la socon karaa wax ka badan 4 dhirta.
Nidaamka daryeelka ayaa ah mid caadi ah: waraabinta joogtada ah ee biyaha diirran, 2 - 3 siyaado ah xilliga firaaqada firfircoon.
Waxaa jira santuuqyo marka qanjirayo. Warshadani kama saari karto kowda carruurta, oo ka tagta hal badbaado, oo loo sameeyay aasaaska kowaad.
U hubso in aad caadi u tahay culeyska rugta, haddii kale culeysku wuxuu ku dhacayaa dhammaan miraha. Tirada ugu badnayd ee burushyada miro-dhalida waa wax ka badan 8.
Qaar ka mid ah "Bull's heart" ayaa laga yaabaa in ay saameeyaan duufaan, sidaas darteed 3 jeer dhirta u baahan tahay in lagu daaweeyo fungicides nidaamka. Laakiin daawooyinka noocan oo kale ah ayaa la isticmaali karaa oo keliya marka infekshanka. Wixii ka hortagga duurka u baahan tahay in lagu daweeyo dareeraha Bordeaux (0.7% xal).
Kala duwan tani waxay si fiican u qaadan doontaa dhulka oo furan iyo aqalka dhirta lagu koriyo. Xididadu waxay bilaabaan inay midho u dhashaan 110 - 115 maalmood ka dib geedo kor u kacay. Sababtoo ah qaangaadhka noocyada kala duwan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhexdhexaad.
Geedaha gaari dhererkiisu yahay 1 - 1.5 m, iyaga oo awood u leh. Miraha waa weyn, miisaanku wuxuu gaaraa 0.6 - 1 kg, midab leh, midab casaan ah, acid iyo sonkorta dhadhanka ayaa isku dhafan.
Miraha yar-yar ayaa laga yaabaa inay muuqdaan dildilaaca, oo wax yar ka dhigaya bandhigga. Wax-soo-saarka waa wax ka badan 14 kg halkii 1 sq.m. Kala duwanaantu waxay u adkaysatay dabaysha goor dambe.
adkaysi u leh dabaylo goor dambe
Tamaandhada waxay u muuqan kartaa mid aan loo jarin sababtoo ah dildilaaca.
Marka koraan geedo kala duwan oo ah "Monomakh's Hat" waxaa ku dhawaad ​​kala duwanaan la'aanta habka caadiga ah. Muuqaalka keliya ayaa ah in marka la soo dego dhulka geedo waa inaysan noqon 45 maalmoodSidoo kale waa inay noqotaa ubaxyo maqan.
Haddii, si kastaba ha ahaatee, oggolow beerto geedo sida, ka dibna duurka u noqon doonaa burush daciif ah, iyo ka dib - iyo goosashada xun. Sidoo kale, marka geedo sii kordhaya, waxaa aad u muhiim ah in la ilaaliyo isku dheelitirnaan heerkulka ah, taas oo ah, si loo yareeyo farqiga u dhexeeya heerkulka inta lagu jiro maalinta iyo habeenkii.
Si loo yiraahdo duurka yaanyo "Monomakh's Cap" ayaa bixiya miro wanaagsan, laakiin waxaad u baahan tahay inaad fuliso tallaabooyin kala duwan ee daryeelka dhirta.
Waraabinta, quudinta, manjooyin ayaa lagu sameeyaa iyadoo loo eegayo nidaamka caadiga ah, laakiin waxaa jira waxyaabo yaryar.
Marka hore, "Captain Monomakh" - noocyo kala duwan oo qoyaan lehSidaa darteed, marka waraabiyo, duurka waa in la dhajiyo si ay biyuhu u wareegaan dhulka. Si aad u hubiso in qoyaanku uu gaadhay qoto dheer, waxaad u baahan tahay inaad qodo dalool meel u dhow baadiyaha, halka majarafaduna waa in si buuxda dhulka loogu riixo. Qoto dheer ee ceelkan waa in ay la jaanqaadaan dhererka laba faroodlood.
Si la mid ah "Bull's Heart" kala duwan, 2 baxsi ayaa laga tagi karaa duurka yaanyadan. U hubso inaad jebiso dhammaan duurka marka ay koraan dhererka 1 mitir. Wixii "Mortakh's Caps" waxaa lagu gartaa koritaanka firfircoon ee cagaarka, laakiin miraha badan ayaa ku dhici doona wax badan. Taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay in la xoqdo dusha sare ee caleemaha.
On hal bush waxay noqon doontaa load caadi ah 2-3 ah ugxan, sababtoo ah sababta oo ah tiro weyn, midhaha siin doonaa load aad u weyn on afkoda.
Labbiska ugu sarreeya iyo goosashada ma laha wax qaas ah. Marka goosashada, waxaad soo ururin kartaa iyo yaanyada, toonna waxay sidoo kale yihiin kuwo aad u fiican.
Wax yar oo ku saabsan kala duwan ee "malabka casaan"
Yaanyadaas badanaa waxaa lagu koriyaa koriyo, laakiin taasi waxay ku taalaa cimilada waqooyiga. Kala duwanaanta noocaas ahi waxay ku fiicnaan doontaa barxad furan.
Miraha waxay u bislaadaan 110 - 115 maalmood, markaa noocyada kala duwan waa mid dhexdhexaad ah. Kala duwanaanshaha kala duwan, duurka dhererkiisu waa 1 mitir. Bushes u muuqda inuu yahay mid aad u daciif ah, waxay caadi ahaan leeyihiin caleenta yaryar.
Miraha waa weyn, miisaanku wuxuu u dhexeeyaa 0.2 illaa 0.6 kg, laakiin qaarkood waxay heli karaan 1 kg iyo 1.5 kg oo culeys ah. Jirka waa mid aad u casiir leh, casaan badan, waxaa jira xusuus malab ah dhadhanka, ku dhowaad dhan lahayn. Cuntada waa celcelis, qiyaastii 6 kg halkii baadiyaha. Laakiin xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, yaanyadaas waxay siin doonaan waxsoosaar dheeraad ah. Waxaa jira celcelis ahaan iska caabin ah cudurada kala duwan.
dhadhanka miro weyn
cabbirka iyo culeyska yaanyada
yaanyada ayaa saameyn kara cudurada
Yaanyadaas waxay u baahan yihiin in la koro geedo si ay si sax ah u qaataan xidid marka ay dhulka ku jiraan. Marka lagu beeri geedo halkii 1 sq.m. Waxaad dhali kartaa 3 dhir. Waa suurad wacan in sanad ka hor yaanyada tufaaxa noocaan oo kale ah waxay koraan loodhadhka, khudaarta xididka, dhirta kaabajka ah. Sida shuruudaha geedo iyo duurka, waxay yihiin heer - heerkulka waa in aan hoos udhicin 10 ° C.
Kala duwanaanshaha daryeelka ee dhirta ee noocyada kala duwan ee this ma aha. Waxa kaliya ee la tixgeliyo waa iska caabinta abaarta ee yaanyadaas. Sidaa daraadeed, waraabinta xad dhaafka ah waxay noqon doontaa waxyeellada noocyo kala duwan.
Wixii "Pink Honey" ayaa si gaar ah loogu baahan yahay bacarimiso oo leh potassium iyo fosfooraska. Waa Bacriminta kuwaas oo ka caawin doona samaynta miraha wanaagsan iyo dhadhan fiican leh.
Sharaxaada kala duwan ee "Konigsberg"
Kala duwanaansho waxaa loola jeedaa bartamaha bartamaha. Qodobbada aan caddayn, waxay koraan ilaa 2 m dherer ahaan. Miraha waa mid dhexdhexaad ah, oo qaabeysan, oo miisaankeedu yahay ilaa 0.3 kg. Jirka waa casiir leh, macaan, casaan dhalaalaya.
Waxaa suurtagal ah in la helo 15-20 kg oo miro ah oo ka mid ah baadiyaha, sidaa darteed tilmaamayaasha wax soosaarka ayaa aad u sarreeya. Waxaa jira nooc ka duwan "dahabka Konigsberg" - noocyo kala duwan.
dhadhan wanaagsan iyo xajmiga miraha
Ma jiraan wax qallafsan.
Saar geedo u baahan 60 - 70 maalmood ka hor laga beerto. Farsamada geedo sii kordhaya waa heer. Markaad soo degto 1 sq.m. waxay qaadan karaan ilaa saddex dhir.
Ma jiro daryeel gaar ah oo ay duurka u yihiin. Waxa kaliya ee la sameeyo waa in bacrimiya dhirta si fiican.